Chọpụta akwa nkpuchi eji eme ụlọ maka anụahụ | Bezzia
5 nkpuchi eji eme ulo iji gosiputa aru gi na mmiri
Susana Garcia | 01/05/2021 20:00 | Mma, Mma ngwaahịa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihe mkpuchi sitere n'okike na nke eji arụ ụlọ iji lekọta ntutu isi, ugbu a, ọ bụ oge nke ihe nkpuchi iji meziwanye anụ ahụ nke ihu ma ọ bụ ahụ n'oge opupu ihe ubi a. Ndị a Enwere ike itinye ihe nkpuchi ebe ọ bụla anyị chọrọ ha dị ezigbo mma na nlekọta anụ ahụ. Ka anyị hụ otu esi emepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma iji nwee anụ zuru oke anyị nwere ike iyi na akwa mmiri.
na Enwere ike iji nkpuchi emere otutu ihe di iche iches Anyị nwere ike ịzụ anụ ahụ n'ọtụtụ ụzọ, na-eji ihe okike na-enye anyị iji mee ka ahụ anyị ka mma. Typesdị ụdị nkpuchi ndị a dị mfe ime ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na a na-eme ha n'ụlọ na ihe ole na ole ma ha na-eme ka ihu ọma dị ukwuu na njirimara ya.
1 Nkpuchi iji mee ka anụ ahụ dị ọhụrụ na oatmeal
2 Masks maka akpụkpọ anụ nwere aloe vera
3 Astringent nkpuchi na lemon
4 Nkpuchi maka akpụkpọ anụ na mmanụ oliv
5 Ikpuchi ekpuchi nkpuchi na shuga
Nkpuchi iji mee ka anụ ahụ dị ọhụrụ na oatmeal
Oatmeal bu ihe eji enyere otutu ihe aka. Ọ bụghị naanị na ọ bụ nri na-edozi ahụ nke na-enye anyị ọtụtụ ntụziaka, mana ọ na-etinyekwa ihe dị ukwuu na akpụkpọ ahụ. Na oatmeal nwere ụfọdụ exfoliating ike na regenerates ikpa n'ihi na n'otu oge ahụ ọ na-elekọta ya ma nyere aka mee ka mmiri dịrị na ya. Can nwere ike iji ụfọdụ mmanụ a honeyụ na-agwakọta ya ma nweta ihe kacha mma. Mmanụ a Honụ nwere ikike ịmịchaa akpụkpọ ahụ ma na - alụkwa nsogbu dị ka akpịrị. Ha bụ ihe abụọ dị mfe iji rụọ ọrụ nke dị mfe ịchọta. Tinye ya na ịhịa aka ọkụ na anụ ahụ wee hapụ nkeji iri abụọ iji wepụ ya mgbe e mesịrị.
Masks maka akpụkpọ anụ nwere aloe vera
Aloe vera bụ otu n'ime ihe ndị sitere n'okike nke ị ga-eji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ilekọta akpụkpọ gị, ihe ọ bụla ọ bụ. Ọ na-ukwuu tụrụ aro maka ihe ndị kasị enwe mmetụta ọsọ ọsọ anụ ahụ n'ihi na ọ na-enyere hydrate, mee ka anụ dị nro ma dị ọcha, ihe niile na otu ihe. Ọ na-eme ka anụ ahụ dị nro na-acha ọbara ọbara ma ị nwere ike iji ya dị ka mgbe anyanwụ gachara iji lekọta akpụkpọ gị anya mgbe anyanwụ gachara. A na - enweta osisi aloe vera sitere na osisi, na-egbutu epupụta ma wepụ gel ha nwere n'ime, mana anyị nwere ike zụta ya n'ụzọ dị mfe n'ụlọ ahịa ahịhịa iji jiri akpụkpọ ahụ mee ihe. Ọ bụ ihe nkpuchi na-eme ka akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie ma na-edozi ya.
Astringent nkpuchi na lemon
Mmanụ mmanu akpụkpọ ga-enwe nsogbu nke ngafe sebum nke na - emeputa ihe ojoo ndi ozo n’ikpeazụ. Otu n'ime ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịnwale ịkpụzi sebum nke mepụtara na akpụkpọ ahụ. Ọ bụ ya mere ihe ọ juiceụ juiceụ mmiri lemon dị mma. Enwere ike ịgwakọta ya na obere mmanụ a honeyụ ma ọ bụ akwa ọcha, ebe ọ bụ na ha na-ete mmiri ma ghara ịgbakwunye mmanụ na akpụkpọ ahụ. Lemọn nwere ike imetụta akpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na ekpughere anyị na anyanwụ mgbe e mesịrị, ya mere, ọ ka mma iji nkpuchi a n'abalị.
Nkpuchi maka akpụkpọ anụ na mmanụ oliv
Olive mmanụ bụ mgbe niile na kichin anyị na ọ bụkwa ihe na-edozi ahụ nke ukwuu enwere ike iji ya mee ihe ihu. Ọ bụ ezigbo moisturizing na-ekwesịghị-eji na mmanu mmanu anụ ahụ, ma ọ bụ ezigbo maka drier ndị. Ọ bụrụ na akpụkpọ gị kpọrọ nkụ ị nwere ike iji obere ngaji ole na ole nke mmanụ oliv na akwa ọcha gwakọta. Of ga-enweta ọtụtụ anụ ahụ na-enwu enwu ma na-enwu gbaa site na iji nkpuchi a.
Ikpuchi ekpuchi nkpuchi na shuga
Sugar, na mgbakwunye na iji ya maka desserts, ọ bụ nnukwu sikrob. Ọ bụrụ na ị gwakọta ntakịrị na ngaji nke mmanụ oliv ị ga-enwe ezigbo exfoliator maka akpụkpọ gị. Nwere ike iji ya naanị na egbugbere ọnụ ma ọ bụ na ihu. Hịa aka ma hichaa ihu gị mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » 5 nkpuchi eji eme ulo iji gosiputa aru gi na mmiri
Mkpụrụ osisi zucchini na anụ ọhịa ewu